Garoonka Diyaaradaha Newark ee magaalada New Jersey oo hakad ku yimid howlaha duulimadka – Walaal24 Newss
January 23, 2019	2	By walaal24
Waxaa gebi ahaanba hakad ku yimid howlihii adeegga duulimaad ee garoonka Caalamiga ah ee diyaaradaha Newark ee magaalada New Jersey ee dalkaasi Mareykanka, kadib markii lagu arkay halkaasi ilaa 2 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha wadin ee loo yaqaano Drone, sida ay sheegeen saraakiisha maamulka hawada garoonkaasi.
Garoonkan ayaa kamid ah 11kan garoon ee ugu mashquulka badan wadankaasi Mareykanka, waxaana la sheegay in diyaaradaha duuliye la’aanta ah ay aad ugu soo dhawaadeen jawi hoosi taasi oo cabsi badan dhalisay.
Dhacdadan ayaa lamid ah middii ka dhacday magaalada London ee xarunta dalka Britain, markii lagu arkay diyaarad aan duuliye wadin, taasi oo saameyn ballaaran ku yeelatay howlaha duulimad iyo dareenka kumanaan qof, waxaana muddo 3 maalmood ah xayirnaa duulimaad yadii.
Mas’uuliyiinta heer Federal ee maamulka garoonka ayaa sheegay in ay ka war Heleen digniino ku aadan in la arkay diyaarad nooca duuliye la’aanta ah, kadibna waxaa ay go’aan-sadeen in hakad la geliyo shaqada si loo xaqiijiyo bad qabka duulimaad.
Dalka Mareykanka waxaa ka diwaangashan ilaa 1.3 Milyen oo Drones ah, balse Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa sheegaya in ay jiri karaan diyaarado kale oo aan la diwaangelinin, waxaana socda baaritaano xoogan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey dalalka Mareykanka iyo Britain waxaa jiray tuhuno iyo cabsi ku aadan isticmalka aaladaha Droneska, oo qeyb ka ah habka sirdoon oo ay adeegsadaan dowladaha, taasi oo keeni karta shaki iyo tuhun fara-badan, balse ma jiraan warar rasmi ah oo ka so baxay dowladda Mareykanka oo ku aadan dhacdadani.
Madaxweyne Dani oo Xafiiskiisa Kulan Kula Qaatay Madax Ka Socotey Hay’adda Interpeace
Wasiirka Arimaha Gudaha XFS oo la kulmay Madaxa Xukuumada maamulka Galmudug
Ra’iisal wasaare Kheyre” Taliyeyaasha cusub iyo Anagaba waxaan isku ognahay in Arrimaha Koowaad ay yihiin Amniga”
Wasaaradda Qorsheynta Soomaaliya oo soo bandhigtay Tusaha Sicirka Badeecadaha